ब्राउजर युद्धहरू: इन्टरनेट एक्सप्लोरर फायरफक्समा हराउन जारी छ, सफारी के हो? | Martech Zone
ब्राउजर युद्धहरू: इन्टरनेट एक्सप्लोरर फायरफक्समा हराउन जारी छ, सफारी के हो?
बिहीबार, अगस्ट 23, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
पूर्ण आकार हेर्न चार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। दुई ब्राउजरहरूलाई हेराइ राख्न इन्टरनेट एक्सप्लोरर र फायरफक्स हो। इन्टर्नेट एक्स्प्लोररको कुल प्रवेश ड्रप हुँदैछ र इन्टर्नेट एक्स्प्लोरर's को सेयर ड्रप हुँदैछ जस्तो देखिन्छ अन्तर्गत फायरफक्स!
डेटा स्रोत: W3Schools
सफारीले कुनै प्रभाव पारेन, विन्डोज मार्केटमा धकेल्ने प्रयासको साथ। सायद सफारीको समस्याहरूको एक समस्या तत्काल र शर्मनाक सुरक्षा मुद्दाहरू हुन सक्छ जुन लार होल्मले यसको डाउनलोडको २ घण्टामा फेला पारेको थियो।
IMHO, इन्टर्नेट एक्स्प्लोररसँग मुद्दा विशुद्ध दुई कारणले हो:
यो इन्टर्नेट एक्स्प्लोरर टोलीको जारी अनभिज्ञ CSS मापदण्ड। यद्यपि यो ध्वनि जस्तो देखिन सक्छ जनसंख्याको एक सानो प्रतिशत हुन सक्छ, यो ती मानिसहरू हुन् कि धेरै फरक पर्दछ कि तिनीहरू परदेशी छन् - विकासकर्ताहरू।
म इन्टर्नेट एक्स्प्लोररलाई घृणा गरेको जस्तो लाग्न सक्छ, तर म वास्तवमै प्रत्येक दिन यसलाई प्रयोग गर्दछु। यो राम्रो प्रदर्शन देखिन्छ र, जब पृष्ठ ह्याक्सहरू लागू गरिन्छ, ती पृष्ठहरूको रेन्डरिंग सुन्दर हुन्छ। म अनुप्रयोगको उपयोगितासँग निरन्तर संघर्ष गरिरहेको छु, यद्यपि मैले मेनु प्रयोग गर्ने बित्तिकै। दाँया तिर मेनूको हास्यास्पद स्थिति एक मौलिक त्रुटि हो। कुनै पनि अनुप्रयोगमा हेर्नुहोस् र सबै मेनूहरू दायाँ होइन तर बाँया पट्टि राखिन्छन्।
मैले भर्खरै भिस्टालाई लोड गरें मेरो छोरो, बिलको, नयाँ चिच्याउने पीसी र मैले तपाईंलाई भन्नु पर्छ कि इन्टरफेस चकाचक छ, विशेष गरी एरो प्रभावहरू चालु छ। बिल स्कूलको लागि Office २०० install स्थापना गर्न सक्षम भयो र मलाई यो मनपर्दछ रिबन मेनू प्रणाली। मलाई सबै कुरा कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन यसले केही समय लिन सक्दछ - तर अहिले सम्म, प्रत्येक सुविधा सहजै उत्कृष्ट दृश्यहरूको साथ स्थित छ जुन कार्यको सही प्रतिनिधित्व गर्दछ।
कोर माइक्रोसफ्ट उत्पादनहरूमा यी प्रयोगकर्ता अनुभव र उपयोगिता बृद्धिलाई दिईएकोमा, म हैरान छु कि इन्टरनेट एक्सप्लोरर टोलीले मद्दतको लागि कल गरेन।
मलाई ध्यान नदिनुहोस्, यद्यपि ... तथ्या on्कमा ध्यान दिनुहोस्।
अद्यतन: एक अर्को तथ्याistic्क अनुसार W3Schools त्यो महत्त्वपूर्ण छ जाभास्क्रिप्टको उपयोगको प्रवेश। किनकि यो प्रयोगकर्ता अनुभवको त्यस्तो आवश्यक हिस्सा बन्न गइरहेको छ, जाभास्क्रिप्ट सक्षम ब्राउजरहरूको प्रयोग बढ्दो छ, केवल%% ब्राउजरहरूले यसलाई समर्थन गर्दैन (उदाहरणका लागि आई मोबाइल) वा असक्षम।
गुगल अनुप्रयोगको साथ तपाईको आफ्नै कस्टम स्टार्टपेज बनाउनुहोस्
GoDaddy GoDaddy बाट खरीद गरिएको Go-Daddy डोमेनको लागि ट्रेडमार्क उल्लंघन दावी गर्दछ
अगस्ट,, २०१ 23 2007:२१ अपराह्न
तपाईको ग्राफिकमा कुन तथ्या ?्कहरू प्रस्तुत गरिन्छ? के यो तपाईंको वेबसाइट हो? एक तथ्या ?्क साइट?
अगस्ट 24, 2007 मा 12: 15 AM
यस डाटाका लागि स्रोत के हो?
अगस्ट 24, 2007 मा 1: 13 AM
मैले भर्खरै Lifehacker टिप्पणिहरुमा पढेको थिएँ कि w3schools तथ्या .्क त्यति राम्रो छैन किनकि तिनीहरू सबै वेब डिजाइन गर्ने मानिसहरुमा केन्द्रित छन् - जुन अन्य जनसांख्यिकी भन्दा फायरफक्स अपोडेसन को धेरै उच्च दर हो।
यसमा अहिलेसम्म पर्याप्त खन्न सकेको छैन।
डीन @ टेक्निकल खुजली
अगस्ट 24, 2007 मा 2: 59 AM
मैले वेब डिजाइनको बारेमा पनि टिप्पणी सुनेकी छु। म व्यक्तिगत रूपमा फायरफक्स प्रयोग गर्दछु कहिलेकाहिँ आईई अपरिहार्य छ, विशेष गरी जब तपाईले अन्य माइक्रोसफ्ट वेब आधारित उत्पादनहरू शेयरपोइन्ट जस्ता प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहुन्छ।
अगस्ट 24, 2007 मा 3: 32 AM
तपाईको महान ब्लग को लागी धन्यवाद।
म जान्न चाहन्छु कि यो तथ्या .्क कहाँबाट आयो किनकि मोजिला फाउण्डेशनले भर्खर केही हप्ता पहिले भन्यो कि उनीहरूले २०० 30 (जून) मा aim०% लक्ष्य राख्दछन्।
अगस्ट 24, 2007 मा 7: 45 AM
यी तथ्या .्कहरु बाट हो W3Schools। माफ गर्नुहोस्, मसँग त्यो पोष्टमा थिएन! मैले आज बिहानै यो पोस्ट अपडेट गरें।
अगस्ट 24, 2007 मा 10: 38 AM
ती तथ्या .्कहरूले समग्र वेबसँग मिलाउन सुरू नगरे सम्म उनीहरूको खास अर्थ हुँदैन। तपाईं आफ्नो सर्भर तथ्या .्कहरू प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ।
अगस्ट 24, 2007 मा 9: 41 AM
यो चार्ट देख्दा यो अचम्मित हुन्छ जब तपाईं विचार गर्नुहुन्छ कि धेरै साइटहरू अझै फायरफक्ससँग उपयुक्त छैनन्। लामो समय फायरफक्स प्रयोगकर्ताको रूपमा, यसले मलाई बौलाहा बनाउँदछ।
अगस्ट,, २०१ 24 2007:२१ अपराह्न
गैर सीएसएस अनुपालनको एक लामो समय आईई ha हेटर बी / सी, आईई on लाई समात्न असमर्थ भएको देखेर म वास्तवमै चकित भएँ, यस तथ्यको बाबजुद कि माइक्रोसफ्टले शैली बगहरू समाधान गरेको थियो भन्ने सुनिश्चित गर्नमा एक राम्रो सभ्य काम गर्‍यो। त्यो, IE6 अपडेटको माध्यमबाट विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूमा धक्का लगाउनु पर्ने तथ्यसँगै, तपाईलाई लाग्छ कि आई7pl अब सम्म डुबेको छ (र यसैले, आई 7. penet प्रवेश गगनचुम्बी)।
क्रिस स्मिटले एक शैली परिप्रेक्ष्यबाट दुई ब्राउजरहरूमा भिन्नताहरूको बारेमा एक महान छोटो पाठ लेख्यो जुन मैले मेरो ब्लगमा समीक्षा गरें। यहाँ.
अगस्ट,, २०१ 27 2007:२१ अपराह्न
यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने मैले जोडें केही उल्लेखनीय खोजहरूको साथ यसलाई अनुसरण गर्नुहोस् पाठक प्रतिक्रियामा आधारित।
सेप्टेम्बर १,, २०११ 1::2007० अपराह्न
चाखलाग्दो कुरा के छ भने आईआई share सेयर घाटा सिधा आई share सेयर ग्रोथमा अनुवाद गरीरहेछ .. के हामीले यो अर्थ पढ्नु पर्छ कि फायरफक्सको वृद्धि पुरानो आईई प्रयोगकर्ताहरूबाट आउँदैछ? यो प्राकृतिक हुन्छ कि फायरफक्सले पुरानो आईई प्रयोगकर्ताहरूलाई जहाज जम्प गर्न प्राप्त गर्दछ, अधिक वफादार प्रयोगकर्ताहरू भन्दा जो आई 6--7--4-5 को सम्पूर्ण अपग्रेड मार्गको लागि गएका छन् ...